Home Version4– Yangon Lucky Group
Foundation ကို Pile Foundation ဖြင့်တည်ဆောက်ပေးမည်။ Ready Mixed Concrete ဖြင့်လောင်းပေးမည်။ (630 kg) ၉ ယောက်စီး 60 MPM, Passenger ဓါတ်လှေကားတစ်စီး တပ်ဆင်ပေးမည်။ ဓါတ်လှေကားမီးပြတ်တောက်လျှင် နီးစပ်ရာအထပ်သို့ အလိုအလျှောက်ရပ်နားသည့် စနစ်တပ်ဆင်ပေးမည်။ ဓါတ်လှေကားတွင် Voice System တပ်ဆင်ပေးမည်။ ဓါတ်လှေကားတွင် ပါဝါမီတာတစ်လုံးနှင့် သင့်လျှော်သော Generator တစ်လုံးတပ်ဆင်ပေးမည်။ တိုက်ခန်း၏အမြင့်မှာ ကြမ်းခင်းမှမျက်နှာကျက်အထိ အမြင့် (၉)ပေခွဲဖြစ်ရပါမည်။ မိန်းနှင့်ဝရံတာတံခါးများကို ပျဉ်းကတိုးကျည်းဘောင်နှင့် ကျွန်းတံခါးတပ်ဆင်ပေးမည်။ တိုက်သစ်၏မျက်နှာစာတွင်...
အခန်းတိုင်းတွင် အိမ်သာခန်းနှင့် ရေချိုးခန်း (တစ်ခန်းစီ) ပြုလုပ်ပေးမည်။ မီးလိုင်းများကိုပိုက်ပြားရိုက်၍ တပ်ဆင်ပေးမည်။ အိမ်သာခန်းတွင်ဘိုထိုင်အိုးတစ်လုံး တပ်ဆင်ပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်ကိုယ်ပိုင်မီတာတစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်ကိုယ်ပိုင်ရေစက်တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပေးမည်။ ရေကို Ground Tank စနစ်ဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်မီးပွိုင့် (၁၂) ပွိုင့်စီတပ်ဆင်ပေးမည်။ အရေးပေါ်အချက်ပြမီးတပ်ဆင်ပေးမည်။ Security Control System with (Video Intercom) တပ်ဆင်ပေးမည်။ FOUNDATION Reinforced Concrete Pile (or) MAT Foundation. RECREATION FACILITIES With Earthquake...
Since the year that our Company has been established and organized, up to now our Jewellery & Jade Co., Ltdathat was chosen by UMFCCI under the permission of the government attended and exhibited Jewellery & Jade at...
Metal Roofing Offer Though not the first thing you notice,yetaroof has much to say aboutahome’s style.Roof shapes and material differ widely , depending upon the usage, and from region to region, contingent upon the climatic...
SARAL construction is your one stop solution for all your Industrial,Commercial and Residential constructions. A team of competent engineers, who provide solution for your problems. Our consultant engineers analyze client requirements to create custom solutions and also helping clients...
Foundation ကို Pile Foundation ဖြင့်တည်ဆောက်ပေးမည်။ Ready Mixed Concrete ဖြင့်လောင်းပေးမည်။ (630 kg) ၉ ယောက်စီး 60 MPM, Passenger ဓါတ်လှေကားတစ်စီး တပ်ဆင်ပေးမည်။ ဓါတ်လှေကားမီးပြတ်တောက်လျှင်...
အခန်းတိုင်းတွင် အိမ်သာခန်းနှင့် ရေချိုးခန်း (တစ်ခန်းစီ) ပြုလုပ်ပေးမည်။ မီးလိုင်းများကိုပိုက်ပြားရိုက်၍ တပ်ဆင်ပေးမည်။ အိမ်သာခန်းတွင်ဘိုထိုင်အိုးတစ်လုံး တပ်ဆင်ပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်ကိုယ်ပိုင်မီတာတစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်ကိုယ်ပိုင်ရေစက်တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပေးမည်။ ရေကို Ground Tank စနစ်ဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးမည်။ တစ်ခန်းလျှင်မီးပွိုင့် (၁၂)...
Since the year that our Company has been established and organized, up to now our Jewellery & Jade Co.,...